Zoma Mainty 2015, ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny taona | Vaovao IPhone
Na dia tsy tena tonga aza ny zoma mainty raha tsy amin'ny zoma 27 novambra ho avy izao, saika ny fivarotana an-tserasera rehetra dia efa maminavina ny varotra amina tolotra izay mahaliana kokoa noho izany. Fotoana mety tsara hividianana vokatra izay narahintsika nandritra ny fotoana fohy tamin'ny vidiny izay sarotra zahana amin'ny fotoana hafa amin'ny taona. Te-hialoha lalana ireo Mpanjaka Telo ve ianao ary efa nomaninao miaraka amin'ny vidiny mihomehy ny fanomezanao? Tandremo, satria ato amin'ity lahatsoratra ity dia hanampy ny tolotra mahaliana indrindra hitantsika isan'andro isika, ary maro amin'izy ireo no haharitra ora vitsivitsy monja, koa arovy ao anaty tianao ny lahatsoratra ary tsidiho matetika izy io mba tsy hanadino na inona na inona.
1 Talata 24 Novambra
1.1 Ksix BXIPPC01 bateria ivelany
1.2 Fanaraha-maso hetsika atao amin'ny Mio FUSE
1.3 Hp Officejet Pro 8610 Printer
2 Alarobia Novambra 25
2.3 EasylifeTM iPhone 6 Case tsy misy rano
3 Alakamisy Novambra 26
3.1 UE Boom 2 Speaker
3.2 TecTecTec Pico Projector
4 Zoma 27 Novambra
4.1 Pop ny activitin'ny fahafolonkarena
4.3 Moto 360 (Generation faha-2)
4.4 Ireo tolotra mahaliana hafa
Talata 24 Novambra
Ksix BXIPPC01 bateria ivelany
Mifanaraka amin'ny iPhone 5, 6 ary 6 Plus, ity bateria ity dia manome 3000 mAh fanampiny ho anao amin'ny iPhone-nao ary tsy mamela anao handry amin'ny fotoana tsy mety indrindra. Hahazo bateria 100% na 180% fanampiny ianao (miankina amin'ny maodelinao iPhone) ka tsy hanana olana ianao amin'ny fahatongavan'ny andro na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra indrindra aza. Amin'izao fotoana izao dia azonao atao ny mividy azy io € 29,99 amin'ny Amazon mitahiry anao 40% amin'ny vidiny voalohany. Haharitra ora vitsivitsy ihany ny tolotra ka maika.
Fanaraha-maso hetsika atao amin'ny Mio FUSE
Ny metatra fanaovana hetsika dia lamaody ary izy ireo dia ho fanomezana lehibe ho an'ity Krismasy ity miaraka amin'ny fiarovana azo antoka. Fifandraisana Bluetooth 4.0, haingam-pandeha, sensor ho an'ny tahan'ny fo, tsy misy rano ary misy loko isan-karazany miaraka amin'ny vidiny € 105 amin'ny Amazon.
Tsara rehetra-avy-iray avy amin'ny Hp miaraka amin'ny fanohanan'ny AirPrint ho an'ny fanontana tsy misy tariby avy amin'ny iPhone sy iPad misy feeder mandeha ho azy 35 pejy, pirinty misy lafiny roa ary fifandraisana Ethernet natsangana Azo alaina ho an'ny € 94,99 amin'ny Amazon, tahiry 52% mandritra ny ora vitsivitsy monja.
Alarobia Novambra 25
Famerenana WiFi tena tsara miaraka amin'ny fifandraisana ethernet ary mifanaraka amin'ny ac / b / g / n, Dual Band (2,4 sy 5GHz) ary ny fenitra WPS. Ampitomboy ny signal ao an-tranonao mba hanananao fandrakofana tsy misy tariby na avy aiza na aiza ary mankafy HD ary na dia atiny multimedia multimedia aza tsy misy olana. Amin'izao fotoana izao ao Amazon dia tsy misy afa-tsy 59 €, fihenan'ny 45% amin'ny vidiny tany am-boalohany. Ora vitsy monja no haharetany.
Ny mpanonta laser miaraka amin'ny fifandraisana WiFi sy ny kalitaon'ny HP amin'ny € 59,99 fotsiny dia fotoana iray tsy azo hadinoina foana. Heveriny fa mitahiry 33% ary efa anananao ao izany Amazon.
EasylifeTM iPhone 6 Case tsy misy rano
Tranga tena tsara ahafahan'ny iPhone mahatohitra rano sy vovoka. Azo asitrika hatramin'ny 6,6 metatra (2 metatra) dia azonao atao ny mitondra ny iPhone 6 mankany amoron-dranomasina sy dobo miaraka amin'ny fiarovana azo antoka ary afaka miditra amin'ireo asany rehetra. Manana izany ianao amin'ny Amazon amin'ny antsasaky ny vidiny (€ 25,99) manomboka amin'ny 13:13 tolakandro raha mpampiasa Premium ianao ary amin'ny 30:XNUMX hariva ho an'ny ambiny.
Alakamisy Novambra 26
Ultimate Ears dia manolotra antsika ilay mpandahateny Boom 2 Bluetooth mahafinaritra izay kely noho ny vidiny. Miaraka amin'ny fihenan'ny 35% mahery ity mpandahateny mahatsikaiky ity azo alaina amin'ny Amazon amin'ny € 129,90, fotoana iray ahazoana azy amin'ny vidiny izay tsy haverina intsony.
TecTecTec Pico Projector
Tetikasa am-paosy misy fifandraisana HDMI, WiFi, Bluetooth ary USB hankafizanao ny atiny multimedia na aiza na aiza alehanao. Mihena 43%, amin'izao fotoana izao dia azonao ampiasaina ao Amazon ho an'ny € 339 fotsiny.
Pop ny activitin'ny fahafolonkarena
Withings dia nisafidy ny hitazona ny hatsarana amin'ny famantaranandro analog iray manontolo ary atambatra amin'ny fanaraha-maso ny hetsika ara-batana mba hanolorana anay an'ity smartwatch ity. Raha ny fanaraha-maso ara-batana no tadiavinao dia ity famantaranandro azonao zahana izao € 99 amin'ny Amazon safidy tsara io. Misy amin'ny loko telo.
Tolotra iray azonao vidiana dieny izao amin'ny antsasaky ny vidiny. Ity mpandahateny Harman Kardon Bluetooth ity dia antoky ny kalitao, mila mamaky ny hevitra fotsiny ianao amin'ny Amazon. Ho an'ny € 99 dia mety ho anao izy io, ahena vetivety ho 50% ka aza lany andro. Manana izany ianao amin'ny Amazon.
Moto 360 (Generation faha-2)
Ny iray amin'ireo smartwatches tsara indrindra eny an-tsena dia mety anao ihany amin'ny € 245, 21% ambany noho ny vidiny mahazatra. Haharitra fotoana fohy izany ka mihazakazaha ary mandehana Amazon ho anao.
Ireo tolotra mahaliana hafa
Bateria 8000 mAh Aukey amin'ny € 11,99
Headphone fanatanjahan-tena Mpow Swift Bluetooth amin'ny € 18,75
Charger marobe miaraka amin'ny port USB 3 amin'ny € 10,49
Bluetooth 3.0 Audio Receiver ho an'ny 14,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Zoma Mainty 2015, ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny taona